Uhlomule ngendondo umphathi womsakazo | News24
Uhlomule ngendondo umphathi womsakazo
UMPHATHI wesiteshi somphakathi uMgungundlovu FM uMnu Muzi Sibiya uthi ubengazi ukuthi umsebenzi wakhe awenzayo ungaze uholele ekutheni ahlonyiliswe ngendondo.
UMnu Sibiya ukusho loku ngemuva kokuba ehlonishwe ngendondo i-Pioneer Award emcimbini wezindondo obowenziwe i-South African Broadcasting Awards ngokuhlanganyela ne-National Community Radio Forum obubanjelwe eLangeni Hotel eThekwini mhla zili-13 kuNdasa (March).
Ekhuluma nentatheli ye-Echo uMnu Sibiya uthe uzizwa ejabule kakhulu ukuthi kukhona abantu abawubonayo umsebenzi awenzayo.
“Mina ngisuke ngizenzela umsebenzi nokuyinto vele ekumele ngiyenze ayi ngoba ngisuke ngibheke ukuhlomula ngaloko, kodwa kuyangithokozisa kakhulu loku okwenzekile. Le ndondo akusiyona nje eyami kuphela kodwa eyomphakathi waseMgungundlovu wonkana ngoba ukube bewungekho wona konke lokhu bekungeke kwenzeka. Ukusebenza kwalomsakazo wabo bekungeke kube impumelelo ngaphandle kokuweseka kwabo.
“Lokhu kusinikeza ugqozu olukhulu njengomsakazo ukuba sisebenze kakhulu siqhubekele phambili sisebenzele umphakathi wethu waseMgungundlovu. Ngibajabulele kakhulu abantu baseMgungundlovu ngalendondo ngoba ingeyabo akusiyona eyami,” kubeka yena.
Uqhube wathi uyafisa sengathi umphakathi ungaqhubeka ubeseke ukuthi bezokwazi ukuqhubekela phambili. “Ukuqalwa kwalesi siteshi kwakungukuthi senzelwa umphakathi ingako ke sizimisele ukwenza noma yini ukuqinisekisa ukuthi sisaqhubeka nokusebenzela umphakathi wethu,” kubeka yena.